Na-egosi izipu site na February, 2020
Ihe atụ Pix2Pix Edges2 Pikachu
1. Chere ka ihe omuma a bukwara
3. Ihe onyonyo a na-acha agba Pikachu ga-egosipụta n’akụkụ aka nri nke enyo na ihe dịka sekọnd 2 I nwekwara ike pịa bọtịnụ “Nyefee” iji mepụta foto ọhụrụ. 4. Pịa "Kpochapụ" ka ihichapụ ma sere kwaaji ọzọ. Emela!
Enwere ike ịchọta otu ọmụma atụ ebe a.
Google Webmaster Ngwaọrụ
Chọrọ ka achọta gị na weebụ? Anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka. Jiri Google Search njikwa tụọ arụmọrụ saịtị gị ma chọpụta ihe nchịkwa webmaster.
Nweta nkwado maka saịtị gị. Ọ bụrụ na ihe adịghị njọ na saịtị gị, lelee ndepụta nke isi okwu, akwụkwọ, yana ngwaọrụ nnwale maka ngwa ngwa enyemaka.
Mụọ otu esi emepụta nnukwu saịtị. Chọrọ ịmepụta saịtị dị mma maka ndị ọrụ ma dị mfe ịhụ na nsonaazụ ọchụchọ? Gbalịa nkuzi na usoro anyị iji wuo ogo, saịtị kachasị mma ọchụchọ.
Nyere Google aka ịchọta saịtị gị: Gbaa mbọ hụ na jikọtara ibe ọ bụla na saịtị gị yana ibe ndị ọzọ na-achọ achọ. Njikọ isi mmalite a kwesịrị inwe ederede ma ọ bụ, n'ihe banyere onyonyo, agwa alt dabara na peeji ọdịda. Can nwere ike ịgagharị njikọ ndị mejupụtara mkpado <a> na njiri href. Denye saịtị ma ọpinye saịtị dị mkpa na saịtị gị. Nyekwa ibe peeji nke aha nwere ike ijiri peeji ahu…
Nkewa nke ihe igwefoto kamera na mmeputa olu site na iji MobileNet
Nhazi nke onyonyo si na igwefoto weebụ na ụda olu na ederede ederede na-eji MobileNet v ọmụmaatụ ebe a. Akụrụngwa ga-anwa ịhụ ihe ọ hụrụ na igwefoto weebụ gị. Nwalee ihe nlele a na ihe nchọgharị weebụ na naanị kamera weebụ. I nwere ike ime ihe atụ nwalee ya ebe a.
Kụzie netwọkụ akwara ozi gbasara ọdịiche dị n'etiti pusi ma ọ bụ nkịta nwere
Mụta netwok neural iji mata ihe di iche na pusi ma obu nkita. Zụọnụ netwọkụ akwara ozi na nke a ihe atụ dị mfe na ihe nchọgharị weebụ na kamera weebụ. Gbalịa imewe onyonyo site na iji Mgbakwunye na MobileNet. Na ihe atụ dị n'okpuru, ị nwere ike soro ihe ịga nke ọma nke ịkọ nkọ.
Egwu animated na-akpali akpali ịfe ihe ngosi gif na-enweghị nsogbu
Egwu animation na-akpali akpali gif oyiyi nbudata na ojiji n'efu. Iji budata onyonyo, pịa aka nri na họrọ oyiyi a ma họrọ Chekwa Foto Dị ka ....
Facebook dị ka bọtịnụ animated maka nbudata n'efu
Facebook dị ka bọtịnụ animated maka nbudata n'efu. Iji budata onyonyo, pịa aka nri na họrọ oyiyi a ma họrọ Chekwa Foto Dị ka ....
Azụghachi azụ azụ na saịtị gị
Azụghachi azụ azụ bụ ntọala maka ọrụ nke igwe nchọta ọchụchọ searchntanetị. Oke ogo nsonaazụ ọchụchọ (SERP) dabere na ọnụ ọgụgụ na ogo nke njikọ njikọ peeji a. Karịsịa, ọnụọgụ na afọ nke njikọ ahụ, ederede ederede gbara njikọ ahụ, "ogo peeji". A na-agbakọọ ọkwa ahụ site na data a, nke a na-eji dozie nsonaazụ ọchụchọ ahụ.
Profaịlụ njikọ jikọtara njikọ azụ na-eduga na saịtị ị na-ele. A na - ejikọ profaịlụ njikọ na njikọ azụ nke weebụsaịtị. Akwukwo azụlinks bu ihe nlere maka ngwa ochicho icho na ekwu maka odi nma na otutu saịtị gi na elele. Nke a na - enyere aka, tinyere ihe ndị ọzọ, na - eme ka ogo nke weebụsaịtị weebụsaịtị jikọtara.
Ntinye azụ. Azụghachi azụ (njikọ inbound) na-ezo aka na njikọ ọ bụla na-arụtụ aka na ibe enyere site na ibe ọzọ. Ọ bụrụ na anyị na-ekwu naanị na njikọ azụlink sitere na weebụsaịtị ndị ọzọ, mgbe ahụ ọrụ bụ isi nke njikọ azụ azụ bụ n'ụzọ bụ ibute ndị ọbịa ọhụrụ na weebụsaịtị anyị.
Alaghachi site na…
Nwaanyị nwanyị na - ese ihe nkiri na - akpali akpali na - enweghị atụ
Malemụ nwanyị na - eji eserese nwanyị na - emegharị ihe nkiri na - ebudata na ojiji n'efu. Iji budata onyonyo, pịa aka nri na họrọ oyiyi a ma họrọ Chekwa Foto Dị ka ....
Billie Eilish eserese eserese n'efu
Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, nke a maara dịka O'Connell (amụrụ na Disemba 18, 2001 na Los Angeles, California), a na-akpọ Billie Eilish, bụ onye America na-agụ egwú na onye na-ede abụ. dere nwanne ya nwoke nke okenye, onye na-akụ egwu, Finneas O'Connell, onye Billie na-arụ ọrụ ide ihe ndị o dere. Billie wepụtara ndekọ ndekọ mbụ ya karịa mgbe otu afọ gachara, EP Unu Smile na Me, nke enyere ya nzere ọla edo n'ọtụtụ eserese. Ya album mbụ mpụta Mgbe anyị niile na-ehi ụra, Olee ebe anyị na-aga? eweputara na Machị 2016, 29. Egwuru egwu kachasị ama sitere na ọba a gụnyere Bad Guy, Bury a Enyi ma ọ bụ Mgbe Ndị Isi Ochie. Dịka o kwuru n'ọtụtụ ajụjụ ọnụ, ọ bụ onye vegan.
Iji budata onyonyo, pịa aka nri na họrọ oyiyi a ma họrọ Chekwa Foto Dị ka ....
Malemụ nwanyị na-akpali akpali eserese eserese gif eserese n'efu
Malemụ nwanyị na-akpali akpali eserese eserese na-egwu egwu na-eji n'efu. Iji budata onyonyo, pịa aka nri na họrọ oyiyi a ma họrọ Chekwa Foto Dị ka ....
Nwa nwanyi iri nri na eserese nke nkpuru osisi na-ese ihe ngosi gif pensụl na-enweghị nbudata
Nwa nwanyi iri nri na mkpuru mkpuru osisi eserese eserese nke eserese gif pensụl na nbudata. Iji budata onyonyo, pịa aka nri na họrọ oyiyi a ma họrọ Chekwa Foto Dị ka ....
Nri slimming afọ nke nwa agbọghọ animated eserese eserese eserese eserese gif na-enweghị nbudata
Nri slimming afọ nwa nwanyị na-ese ihe nkiri eserese pensụl ịbịaru gif na nbudata n'efu. Iji budata onyonyo, pịa aka nri na họrọ oyiyi a ma họrọ Chekwa Foto Dị ka ....
Gbochie eserese na kọfị eserese nke eserese gif na-enweghị ihe ọ bụla
Gbochie na eserese kọfị na-ese ihe ngosi eserese gif eserese eserese na iji n'efu. Iji budata onyonyo, pịa aka nri na họrọ oyiyi a ma họrọ Chekwa Foto Dị ka ....
Ed Sheeran de foto anim anim
Ed Sheeran, ezigbo aha Edward Christopher Sheeran (amụrụ 17 nke ọnwa nke iri na abụọ nke 1991) Halifax bụ onye England na-agụ egwu na onye na-agụ egwu na mkpọrọ Irish.
Na mbido 2011, ọ weputara EP nke nwere onwe ya nke akpọrọ Mba. 5 Mmekọrịta ngbako, nke achọtara site na mgbapu / agwaetiti Atlantic. Ọ dọtara uche karịsịa ekele maka ndị otu "The A Team", "Lelọ Lego" na "Ahụrụ M Ọkụ".
Otu egwu egwu izizi ya + wepụtara na UK na 2011 meriri ntuliaka platinum. N'afọ 2012, o meriri nturu ugo BRIT abụọ maka Sọlọmọn kacha mma na British Star nke Afọ, ebe enyere ndị otu 'The A Team' akara ngosi Ivor Novell maka Abụ kacha mma na egwu na egwu.
Na-abụ abụ nwata na igwe okwu na-eserese efe na-egwu egwu gif n'efu
Na-abụ abụ nwata na igwe okwu katọn na-ese ihe osise na-ese gif pensụlụ na iji n'efu. Iji budata onyonyo, pịa aka nri na họrọ oyiyi a ma họrọ Chekwa Foto Dị ka ....
Onwere ihe nlere na eserese eserese ịlele n’efu na-enyocha
Ndenye ọpụpụ na-eserese ihe ngosi eserese gif eserese eserese na-enweghị ihe ọ bụla. Iji budata onyonyo, pịa aka nri na họrọ oyiyi a ma họrọ Chekwa Foto Dị ka ....
Ego n’okpuru ugogbe onyonyo a na-ese n’elu eserese free
Ego n’okpuru ikwa enyo enyo dị elu na-egosi eserese na iji n'efu. Iji budata onyonyo, pịa aka nri na họrọ oyiyi a ma họrọ Chekwa Foto Dị ka ....
Nwa nwanyi na akwukwo ndi edere edere na eserese eserese
Nwa nwanyi na akwukwo ndi edere edere na eserese nke eserese na anakpo. Iji budata onyonyo, pịa aka nri na họrọ oyiyi a ma họrọ Chekwa Foto Dị ka ....
Site na egwu YouTube, ịnwere ike ịge ntị na ntanetị kachasị ọhụrụ, nọrọ na ndị na-ese ihe ị hụrụ n'anya wee hụ ọtụtụ egwu ị nwere ike ịnụ ụtọ na ngwaọrụ gị niile.
Nwa agbọghọ na-egwu guitar na-eserese ihe nkiri gif onyonyo eserese n'efu
Nwa agbọghọ na-egwu guitar na-eserese ihe nkiri gif onyonyo na-egwu egwu na eji n'efu. Iji budata onyonyo, pịa aka nri na họrọ oyiyi a ma họrọ Chekwa Foto Dị ka ....
Lamborghini animation sere eserese eserese foto
Lamborghini animation animated gif onyonyo weputara na nbudata n'efu. Iji budata onyonyo, pịa aka nri na họrọ oyiyi a ma họrọ Chekwa Foto Dị ka ....
Dog eserese eserese eserese eserese nke eserese
Dog eserese eserese eserese eserese na eserese. Iji budata onyonyo, pịa aka nri na họrọ oyiyi a ma họrọ Chekwa Foto Dị ka ....
Foto eserese eserese eserese eserese esere ese na-adọ ekwentị mkpanaaka na nbudata
Animation eserese pensụl na-ese ekwentị mkpanaaka na nbudata na iji n'efu. Iji budata onyonyo, pịa aka nri na họrọ oyiyi a ma họrọ Chekwa Foto Dị ka ....
Eserese eserese eserese gif pensụl eserese
Eserese eserese eserese gif pensụl ịkeka akpụkpọ ụkwụ na ojiji n'efu. Iji budata, pịa aka nri na eserese ma hoputa Chekwa Foto Di….
Foto eserese eserese eserese eserese na-atọ nwanyị na laptọọpụ n'efu
Animation animation gif picture pine pensụl nwaanyị na laptọọpụ ebudata na iji n'efu.
Ihe esere eserese eserese eserese OPEN nbudata
Esere eserese eserese nke ihe omuma OPEN n’ime aka nwanyi maka nnabata na ojiji n'efu.
Nwa agbọghọ na-egwu violin na-ese ihe nkiri eserese n'efu
Nwa agbọghọ na-egwu violin na-egwu egwu gif animation n'efu maka iji ya na n'efu.
Nwatakịrị nwanyị dị ndụ na-ese ihe omumu
Foto eserese pensụl nke nwa agbọghọ na-eme maka nbudata na ojiji n'efu gụnyere ọrụ azụmahịa.
Egwu Celtic mp3 na flp faịlụ maka nbudata n'efu
Budata na efu (na nkọwa Njikọ YouTube) Egwuregwu Celtic mepụtara site na iji FL Studio. Ọdịdị mp3 na flp dị. FL Studio bụ ụlọ ọrụ DAW mepụtara site n'aka ụlọ ọrụ Belgium Image-Line. Emere egwu a site na igwusa sampleti, ihe nlere dijitalụ na akara MIDI. Usoro nke ịgbanye ụda egwu dabara adaba maka ịmepụta egwu kachasị n'ụdị elektrọn, mana ndị na-emepụta na-eji mmemme ahụ nke ọma maka ụdị ndị ọzọ.
Traveler Premium HTML Template Free Download
Templatedị ndebiri HTML Onye njem bu ihe nlere di iche maka ihe ngbanye ugwu eji eme ya obughi na ndi isi na ndi ozo, nke n’eme ka ndi oru novice meputa webusaiti izizi ha puru iche.
Ebumnuche m bụ imepụta ngwanrọ mbụ ka m wee ghara ime ihere maka ọrụ m n'ihu ndị ahịa nakwa na onye ahịa ekwesịghị itinyekwu ego ...
Skew adịchaghị HTML Template Free Download
Templatedị ndebiri HTML SKEW bụ ndebiri pụrụ iche maka iji ngwa ngwa dị ala ọ bụghị naanị maka ndị okike na-enye ndị ọrụ novice ohere ịmepụta weebụsaịtị mbụ pụrụ iche maka nnabata ngwa ngwa.
Ebumnuche m bụ imepụta ngwanrọ mbụ ka m wee ghara ime ihere maka ọrụ m maka ndị ahịa nakwa na onye ahịa anaghị etinye ego na oge karịa…
Eserese HTML foto maka nbudata n'efu
Templatedị ndebiri HTML Photography bu ihe nlere di iche maka ihe omuma karie ihe eji eme ya obughi maka ndi na - ese ihe, nke na - enyekwa ndi okacha amara meputa webusaiti izizi ha puru iche.
Ebumnuche m bụ imepụta ngwanrọ mbụ ka m wee ghara ime ihere maka ọrụ m n'ihu ndị ahịa nakwa na onye ahịa ekwesịghị itinyekwu ego na oge karịa…
Peeji nke HTML adịchaghị PIX nbudata
Templatedị ndebiri HTML PIX bu ihe nlere di iche maka ihe ngbanye ugwu eji eme ya obughi na imeputa ihe na onyonyo, nke n’eme ka ndi oru novice meputa webusaiti izizi ha puru iche.
Ebumnuche m bụ imepụta ngwanrọ mbụ ka m wee ghara ime ihere maka ọrụ m n'ihu ndị ahịa nakwa na onye ahịa ekwesịghị itinyekwu ego na oge…
Eserede HTML pụrụ iche nbudata
Templatedị ndebiri HTML Pụrụ iche bụ ihe ndozi pụrụ iche maka iji ala dị oke ala, ọ bụghị maka imewe weebụ, na-enye ohere ọ bụla ndị ọrụ novice ịmepụta weebụsaịtị mbụ pụrụ iche maka ịbugharị ngwa ngwa.
Ebumnuche m bụ imepụta sọftụwia mbụ ka m ghara ime ihere maka ọrụ m n'ihu ndị ahịa, ka ndị ahịa wee ghara itinye ego na oge karịa ka ọ dị…